Ogaden News Agency (ONA) – Xiisadii Siyaasadeed ee Ka Dhalatay Doorashada Kenya oo Taagan.
Xiisadii Siyaasadeed ee Ka Dhalatay Doorashada Kenya oo Taagan.
Posted by ONA Admin	/ October 13, 2017
Waxaa weli qeybo kamid ah dalka Kenya ka socda mudaharaadka ay dhigayaan taageerayaasha mucaaridka ee NASA oo hogaamiyahooda Raila Odinga uu sheegay inuusan ka qeyb qaadan doonin doorashada dhici doonta 26ka bishan Oktoober.
Arrinta ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii uu Baarlamaanka Kenya ansixiyey sharci cusub ee Doorashooyinka, kaasi oo qeexaya in murashaxii ka hadha tartanka ay micnaheedu tahay in murashaxa soo hadhay uu si toos ah ugu guuleysanayo doorashada.
Sharcigan cusub oo uu Baarlamaanka u badan xildhibaanada xisbi Madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Jubilee ayaa ah mid ay mucaaridka si weyn uga soo horjeedaan, balse Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay inuu diyaar u yahay doorashada 26ka Oktoober.
Raila Odinga ayaa ku dhawaaqay go’aankii lama filaanka ahaa ee uu ku sheegay in isaga iyo kuxigeenkiisa Musayoko aysan ka qeyb geli doonin tartanka doorashada 2aad ee la qorsheeyey inay dhacdo 26ka Oktober. Wuxuuna ka gadooday in aan waxna laga bedalin guddigii doorashooyinka IEBC oo uu sheegay inay horey u musuq maasuqeen codbixintii kowaad ee dhacday 8dii bishii Agoosto oo ay maxkamada sare laalshay.
Guddiga Doorashada ayaan weli jawaab kasoo saarin go’aanka Odinga iyo xulafadiisa iyo sida laga yeeli doona hada codbixinta loo balansan yahay inay dhacdo 26ka bishan.